Semalt: Fidio ny Access ho an'ny tranonkala Content amin'ny Meta Tags And Robots.txt Files
Jason Adler, Semalt Customer Success Manager, dia miteny fa azo atao ny mifehy ny zavatra ifampizarana amin'ny Bing, Yahoo ary Google rehefa mitazona ny angovo azo antoka ary tsy mizara izany amin'ny Internet . Ny antontan'isa tokony hajainao dia ahitana fampahalalana amin'ny fifandraisana, PayPal ID, antsipirian'ny carte de crédit, usernames, ary tenimiafina. Tokony hanakana ity karazana fampahalalana ity ianao tsy hiditra amin'ny Google sy ny fitaovam-pitadiavana hafa. Raha ny fanakanana ny URLs amin'ny tranokalanao, dia azonao atao ny manajanona ny Google sy ny fitaovam-pitadiavana hafa tsy hikirakira pejy sasantsasany na lahatsoratra. Midika izany hoe rehefa mandalo ny valin'ny fikarohana ny olona dia tsy hahita sy hivezivezy amin'ny URL izay nakatona. Tsy ho afaka hiditra ao amin'ny votoatiny ihany koa izy ireo, ary afaka manakana lahatsoratra maro tsy ho hita ao amin'ny valin'ny fikarohana Google. Toy izao ny fomba hanakanana ny fidirana amin'ny tranonkalanao:
Sakana ny fijerena fikarohana amin'ny meta tags: Azonao atao ny manakana ny pejy tsy miseho amin'ny mozika mikaroka rehefa mampiasa ny meta tsy misy endritsoratra ao amin'ny kaontinao HTML. Googlebot mikaroka pejy tsy manana an'io meta io ary hametraka ny pejy manokana avy amin'ny valin'ny fikarohana nataony noho izany. Ampahafantaro anay eto fa ity meta meta ity dia tsy miasa afa-tsy raha tsy niova ny rakitra robots.txt.
Adikao ny URL miaraka amin'ny robots.txt rakitra: Ny rakitra Robots.txt dia miorina ao amin'ny fototry ny tranonkalanao ary manondro ny ampahany amin'ny tranonkalanao izay tsy tianao ny mpitsikilo sy ny spiders amin'ny index. Mampiasa ny Standard Exclusion Robots izy io, izay fehin-kevitra miaraka amin'ny baikom-paritra manondro ny toerana misy sy ny fomba hidirana amin'ny tranokalan'ny web. Robot..Ny txt koa dia manampy amin'ny fisorohana ny sary tsy hampiseho ny valin'ny fikarohana fa tsy manakana ireo mpampiasa tsy hampifandray ny tranokalanao amin'ny pejy manokana. Tokony hotadidinao ny fetra sy ny famerana ny rakitra robots.txt alohan'ny hanovanao azy. Ny sasantsasany sasany dia manome antoka fa voasakana ny URL. Ny torolalana momba ny robots.txt dia torolàlana, izay midika fa tsy afaka mampihatra ny fitondrantenan'ireo mpikirakira Internet izy ireo. Ny mpikirakira rehetra dia mandika ny fampiasana ny syntax amin'ny fomba samihafa, ary ireo rakitra robots.txt dia tsy afaka manakana ny fifehezana amin'ny rohy avy amin'ny tranonkala hafa. Google dia tsara ny manaraka ireo torolàlana amin'ny rakitra robots.txt, saingy mety tsy ho vitan'ny motera fikarohana mba hanondroana tranonkala voasakana noho ny politikany.
Mialà amin'ny Google Local and Google Properties: Azonao atao ny manakana ny votoatinao tsy hiseho amin'ny sehatr'ireo Google samihafa raha vao indexina. Ireto ny Google Local, Google Flights, Google Shopping, ary Google Hotels. Raha misafidy ny handà tsy hiseho amin'ny endriny rehetra ianao, ny votoatinao izay nailikilika dia tsy voatanisa na havaozina. Ny lahatsoratra rehetra izay aseho amin'ny iray amin'ireo sehatra ireo dia hoesorina ao anatin'ny 30 andro aorian'ny safidy.
Zava-dehibe ny manafina ny votoaty sarobidy sy ilaina amin'ny mpitsidika anao. Raha manana lohahevitra mitovitovy amin'ny toerana maro ny tranokala, dia mety hamela fahatsapana tsy mety amin'ny mpamily sy ny mpitsidika izany. Izany no antony tokony hanafenanao ireo pejy rehetra ireo ary aza avela hanondro azy ireo ny milina fikarohana. Esory ny votoatin'ny antoko fahatelo. Tsy maintsy esorina ny votoaty fahatelo izay tsy sarobidy amin'ny tranokalanao amin'ny fotoana rehetra. Aza avela ho hitan'i Google fa mizara votoatin'ny antoko fahatelo ianao raha mahita ny lanjany fikarohana ao amin'ny tranokalanao. Rehefa namoaka votoaty avy amin'ny tranonkala marobe ianao dia mety hampihatra anao ny Google, ary azonao atao ny manakana ireo lahatsoratra dika mitovy mba hanatsarana ny laharana Google anao Source .